Sexting နှင့်အီသီယိုးပီးယားမြောက်ပိုင်းရှိကျောင်းလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသောအပြုအမူများ - ပျံ့နှံ့မှုအချိုးကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတွက်ချက်သည် (2019) - Your Brain On Porn
မြောက်ပိုင်းအီသီယိုးပီးကျောင်းလူငယ်များအကြား sexting နှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေ: ခန့်မှန်းသုံးပြီးပျံ့နှံ့အချိုး (2019)
BMJ လိင် Reprod ကနျြးမာရေး။ 2019 ဧပြီ 27 ။ pii: bmjsrh-2018-200085 ။ Doi: 10.1136 / bmjsrh-2018-200085 ။
Abrha K သည်1, Worku တစ်ဦးက2, Lerebo W က3, Berhane Y ကို4,5.
ဝင်ငွေနည်း setting တွင်လူငယ်များဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုသည်အလွန်သူတို့၏ porngraphy ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် sexting သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလက်ခံရရှိနှင့် / သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများမပို့ခဲ့သည်။ ဤငယ်ရွယ်လူဦးရေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲ။ သို့သော်ဤပြောင်းလဲမှုထေူမှသက်သေအထောက်အထားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ setting ကိုအတွက်မရရှိနိုင်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသီယိုးပီးယားမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလူငယ်များအကြား sexting နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူများ၏ဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှုတစ်ခု multistage နမူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းတွင်လူငယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဧပြီလ 2015 မှမတ်လကနေကောက်ယူခဲ့သည်။ ဒေတာကိုတစ်ဦး Pre-အတည်ပြုအမည်မသိသင်တန်းနည်းပြ-guided ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ Poisson ဆုတ်ယုတ်ယင်း၏ 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့်အတူပြုပြင်ပျံ့နှံ့အချိုးတွက်ချက်ဖို့ run ခဲ့သည်။ အားလုံးကွဲပြားခြားနားမှု p တန်ဖိုးများ≤0.05များအတွက်အဖြစ်သိသာစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
စုစုပေါင်း 5924 မေးခွန်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြခြင်း, 5306 (89.57%) ကျောင်းကိုလူငယ်ရလဒ်ကို variable တွေကိုပေးရန် related မေးခွန်းများအပြည့်အဝအတွက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဤအဖြေဆိုသူ, 1220 (22.99%; 95 မှ 19.45% CI 26.96) မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 1769 (33.37%; 95 မှ 30.52% CI 36.35) sexting နှင့် 2679 ကြုံတွေ့ခဲ့ကြ (50.26%; 95 မှ 46.92% CI 53.61) ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူ၏အချိုးအစားညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကြားတွင် sexters အကြား (ပြုပြင်ပျံ့နှံ့အချိုး (APR) 95% CI 3.02 2.52 မှ (3.62)) နှင့် Two-ခြံ (APR 95% CI 2.48 (1.88 မှ 3.27) သုံးခြံခဲ့ ) သူတို့၏ counterparts တွေကိုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက။
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကနေတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထိတွေ့မြောက်ပိုင်းအီသီယိုးပီးကျောင်းလူငယ်များအကြားပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ထိုအကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းပညာရေးအစီအစဉ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ခန့်မှန်းပေါ်ထွက်လာစဉ်းစား, ဒီဧရိယာထဲမှာနောက်ထပ်သုတေသနမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
KEYWORDS: မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူ; ညစ်ညမ်း; ကျောင်းကိုလူငယ်; sexting
Doi: 10.1136 / bmjsrh-2018-200085
ညစ်ညမ်းသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို သုတေသနအဖွဲ့၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။ ဘာလဲ… t.co/R3ImzHOS4a